Kuveyt Menkul | Siyaasada Sharaxaada Lacagta Madoow
Fur akoon dhab ah
Fur akoon demo ah
Siyaasada Sharaxaada Lacagta Madoow
Lacagta la dhaqay waxay lacag ka dhigtaa dhaqamada sharci darrada ah ama aaladaha kale ee lacagta lagu qiimeeyo lacagta, ama maalgashiyada u muuqda kuwo sharci ah. Shuruucda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee khuseeya shirkadaha adeegsadayaashoodu dhigikaraan oo ay lacagtooda kala bixi karaan xisaabaadkooda. raba inay keenaan. Sababtaas awgeed, Shirkadda waxay qaaddaa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah raadinta iyo ka-hor-tagga lacagta la dhaqay iyo maalgelinta argagixisada. Xeerarka gudaha waxaa lagu ilaaliyaa iyadoo la raacayo shuruudaha caalamiga ah ee la xiriira.
Kuweyt Nidaamyadeeda la-dagaallanka lacagta la dhaqay Macaamillada la Sameeyay Ujeeddada hannaanka la-dagaallanka lacagta la dhaqay ee ay fulisay Aron Capital waa in la hubiyo in adeegsadayaasha fulinaya codsiyada qaarkood lagu qeexay heer macquul ah, iyo sidoo kale u hoggaansanaan. si loo yareeyo culeyska iyo saameynta ay ku leeyihiin dadka isticmaala sharciga.
Kuwait Securities waxaa ka go'an inay ka taageerto dowladaha maalgalinta howlaha argagixisada aduunka iyo la dagaalanka lacagaha la dhaqay. Sababtaas awgeed, Kuwait Menkul waxay soo saartay nidaam elektiroonig ah oo heer sare ah oo wax ku ool ah. Thanks to nidaamkan, xogta aqoonsiga macmiilka waa la diiwaangeliyey waana la xaqiijiyey, iyo diiwaanno faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan macaamilada waa la ilaaliyaa lana ilaaliyaa. Kuuriyada Kuweyt waxay si taxaddar leh ula socotaa dhaqdhaqaaqa macaamil ganacsi ee shakiga leh oo muhiim ah, waxayna siisaa waxqabadyo sida & bixinta 34 macluumaad waqtiyeysan oo dhameystiran & # 34; Waxay u warbixisaa hay'adaha sharci fulinta iyaga oo soo gudbinaya warbixin. Si loo ilaaliyo qaabdhismeedka nidaamyada warbixinta iyo in la ilaaliyo ganacsiyada, qaab dhismeedka sharciga ayaa adeegyo ilaalin sharci ah siiya kuwa bixiya macluumaadkaas. Si loo yareeyo halista ka dhalan karta lacagta la dhaqay iyo halista ka dhalan karta maalgalinta howlaha argagixisada, Kuwait Securities waligeed ma hesho deebaaji lacageed ama ma fuliso macaamil lacag bixin lacag ah. Waxay xaq u leedahay inaysan oggolaan inay ku dhaqaaqdo tallaabo kasta oo ay u aragto inay xiriir la leedahay falal dambiyeed. Ammaanada Kuweyt waa ka mamnuuc in ay u soo sheegaan waxqabadka ay ka shakiyaan dadka isticmaala. Aqoonsiga iyo xaqiijinta macaamiisha Si loo hubiyo u hoggaansanaanta sharciyada ka-hor-taga lacagta la dhaqay, Kuuriyada Kuweyt waxay u baahan tahay laba nooc oo dukumiintiyo ah si loo xaqiijiyo aqoonsiga macmiilka. Dukumiintiga ugu horeeya ee aan codsaneyno waa dukumiintiga ay si rasmi ah u soo saarto dowlada waxayna ku qeexaysaa dukumiintiga sawirka qofka isticmaala. Baasaboor ay dowladdu soo saartay, ruqsadda darawalnimada (loogu talagalay waddamada ruqsadda darawalnimada loo aqbalo inay tahay dukumiintiga aqoonsiga koowaad) ama kaarka Aqoonsiga maxalliga ah ayaa sidoo kale ansax noqon kara. Dukumiintiga labaad ee aan codsaneyno waa qaansheegad loogu talagalay maalgashadaha oo leh cinwaanka saxda ah ee lasoo saaray 3 bilood kahor ugu dambeyn. Qaansheegta, soo koobista koontada bangiga, bayaan ama dukumiinti kale oo leh cinwaanka iyo magaca maalgashadaha oo ka socda hay'ad caalami ah oo la aqoonsan yahay ayaa sidoo kale ansax ah. Si wax looga beddelo lambarka taleefanka ee la xidhiidha Profile-ka Maal-gashiga, maalgashadayaasha shirkaddu waa inay haystaan ​​dukumiinti xaqiijinaya inay hayso lambar taleefan oo hadda jira (heshiis wadaha moobiilka) iyo sawirka aqoonsiga isticmaalaha wejiga xiga. Macluumaadka shaqsi ee isticmaalaha wuxuu la mid noqon doonaa labadan dukumiinti. Isticmaalayaasha shirkadda waxaa looga baahan yahay inay soo diraan aqoonsigooda hadda iyo macluumaadka xiriirkooda waqtigii loogu talagalay markii isbedelka la sameynayo. Dukumiintiyada ku jira waraaqaha aan reer galbeedka ahayn waa inuu u turjumaa Ingiriisiga turjubaanka rasmiga ah; Tarjumaadda waa in lagu shaabadeeyo oo uu saxeexaa turjumaanku oo loo diraa iyadoo la raacayo sawir cad oo macmiilka ah iyo dukumintiga asalka ah. Si lacag loogala baxo koontada ganacsiga adoo adeegsanaya mid ka mid ah qaababkan, lacag ayaa loo diri doonaa jeebkaaga 3 maalmood oo shaqo ah. Haddii lacag lumiso inta lagu gudajiro, lacag celin laguma sameyn karo iyadoo la isticmaalayo habka lacag celinta. Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso bayaanka halista kahor intaadan bilaabin ganacsiga. Amaanada Kuweyt waxay u baahan tahay in dhammaan akoonnada leh magaca isticmaalaha baxa ay ka yimaadaan magacooda u dhigma magaca isticmaalaha diiwaanadeena. Lacag bixinta qeybta saddexaad lama aqbalo. Ka-noqoshada waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la metelayo lacag-bixinno marka laga helo isla koonto iyo si la mid ah. Kala bixida magaca qofka qaata, magaca waa inuu si sax ah ugu dhigmaa magaca isticmaalaha diiwaankayaga. Haddii dhigaalka lagu bixiyo wareejinta siligga, lacagaha waxaa kaliya oo loogala bixi karaa iyada oo loo diro silig isla bangiga iyo isla koontada asalka. Haddii aad dhigato deebaaji, xawaalad elektaroonig ah.
Shatigayaga FSCA wuxuu dammaanad ka qaadanayaa maalgashadayaasha maalgashi gaaraya ilaa 100,000 USD.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska